संघीय सरकारको एकात्मक सोचका कारण प्रदेश २ सरकारको काम गति लिएको देखिदैन ः डा.डिम्पल झा
अन्तरवार्ता 27 पटक पढिएको क्रान्तिद्वार दैनिक
कर्मचारी अभाव अझै पुरा भएको छैन
प्रदेश नं.२ सरकारका भौतिक योजना तथा यातायात राज्यमन्त्री डा.डिम्पल कुमारी झासंग प्रदेश सरकारको काम कार्यवाही बारे गरिएको अन्तवार्ता प्रस्तुत छ ।
० भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश २ मा मुख्य मुख्य काम गरी रहेको छन ?
प्र्रेश नम्बर २ मा हाम्रो मन्त्रालयबाट रेड बुकमा उल्लेख भए अनुसारको कामहरु भई रहेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलना भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले काम धमाधम गराई रहेका छन ।
यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा रहेका छन । सोही कार्यालय मार्फत कामहरु सूचारु भएका छन ।
०प्रदेश २ सरकारको जुन किसिमको जिम्मेवारी छ । त्यस अनुरुप काम गर्न प्रदेश सरकार सकने भने जनस्तरबाट गुनासो छ । यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
प्रदेश २ को सरकारको गल्ती होइन । यो गल्ती संघीय सरकारको हो । काममा ढिल्ला सुस्ती देखिएका छन । जति काम हुनु पर्ने थियो । प्रगति नदेखिनु को मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । किनकी जब सम्म दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुँदैन तब सम्म प्रगति देखिदैन । मन्त्री आफै गएर त काम गर्दैन । काम गर्ने कर्मचारी नै हो ।
म यहाँ २०७५ साल साउन ९ गते राज्यमन्त्री भएर आएको हो । मैले आज सम्म आफ्नै मन्त्रालयमा चारवटा सचिव फेरीएको हेरी सके ।
जब एउटा सचिवले कुरा बुझदछ । अर्को सचिव पठाई दिन्छ । त्यसले कुरा बुझ्नु अर्को पठाई दिन्छ । अनि जति कर्मचारी चाहियो । त्यस अनुसारको कर्मचारी पठाउँदैन । काम गर्न कर्मचारी चाहियो । हामीले यहाँबाट योजना सबै ठाउँमा पठाई सकेका छौं । जुन हिसाबले कर्मचारी आयो । त्यस हिसाबले सबै जनालाई सबै जिल्लामा मिलाएर पठाई सकिएको छ । खानेपानी, प्राविधिक र भवनको कार्याल्य र प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट सिंचाई कार्यालय भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत खुली सकेका छन । सबै ठाउँमा कर्मचारी पुरा छैन । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो । प्रदेश की संघीय सरकार । ५ सय कर्मचारी पठाउने ठाउँमा ५ जना कर्मचारीले के हुन्छ । संघीय सरकारको एकात्मक सोचका कारण प्रदेश २ सरकारको काम गति लिएको देखिदैन ।
अहिले हामी संघीयतामा छौं । तर पूर्ण रुपले संघीयताको उपलब्धी प्राप्त गर्न सकि रहेको छैनौं । यो काम गर्नेका लागि प्रयासरत छौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सबै जिल्लामा अख्तियारी गएका कामहरु समयमा शुरु भई सम्पन्न हुनेछ । त्यसको हामीले अनुगमन समेत गर्नेछौं ।
प्रदशे २ सरकारको काम हामीरेल जस्तो फास्ट गराउँछौं ।
० तपाई भन्नु हुन्छ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चाहिए जतिका कर्मचारी पठाई दिएन । तर आएका कर्मचारी भन्छन । हामीले प्रदेश २ मा काम पाईरहेको छैन। वास्तविकता के हो ?
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा त्यस्तो देखिएन । हाम्रोमा प्राविधिक कार्यालय दु्ई÷दुई जिल्लाको एक ठाउँमा छन । विद्यायक÷सांसदको कोष त्यही अन्तर्गत चलिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण सम्बन्धी काम त्यसै कार्यालयबाट भई रहेको छ । भ्याई नभयाई सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी अभाव अझै पुरा भएको छैन । कसले काम पाएन । हाम्रो मन्त्रालयमा की अन्यत्र जानकारी पाए भने ठाउँ दिलाउन सहयोग गर्छु । जति जना अहिले कर्मचारी छन । सबै आ—आफ्ना काममा व्यस्त हुनु हुन्छ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला तहमा रहेको कार्यालय मार्फत काम भईरहेका छन ।
० यहाँले भन्नु भयो । प्रदेश २ मा धमाधम काम भएका छन । कर्मचारी पुगी रहेको छैन । भएको कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई को अवस्था छ । तर बजेट एकदम कम खर्च भएका छन् । कति जति खर्च भएको होला ?
कर्मचारी अभावका कारण यी सब हुन गएको हो । वन, पर्यटन अर्थ लगायतका मन्त्रालयमा सचिव थिएन । यसको जिम्मेवारी को ? संघीय सरकारले कर्मचारी पठाई रहेको छैन । मुल काम हुने बेलामा सचिव हेरफेर गरि दिने कतिपय मन्त्रालयमा सचिव नै नहुनुको कारणले अपेक्षा गरे अनुसार काम भएको छैन । काम नै नभएपछि बजेट कसरी खर्च हुन्छ । यी सबै कुारमा प्रदेश २ सरकारको दोष होइन । कर्मचारी नभए पछि काम कसरी अगाडी बढछ । मन्त्रीले गर्ने काम गरेर सम्भव छैन । मैले यहाँबाट भर्खर तोक लगाए तर प्रकृया पुरा गरेर पठाउने काम सचिव लगायतका कर्मचारी को हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक वर्ष नपुग्दै चारवटा सचिव फेरी सकिएका छन् । यही अवस्था अरु मन्त्रालयमा पनि छन् । काममा ढिल्ला सुस्ती हुनको मुख्य दोषि केन्द्र सकारको हो । यसमा प्रदेश सरकार दोषि होइन । कर्मचारी खटाउने ठाउँबाट भएको कमी कमजोरीका कारण यसतो हुन गएको हो । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा बढुवा केन्द्र सरकार बाट नै भईरहेको छ । के गर्ने कसरी काम अगाडी बढछ?
० प्रदेश २ सरकारले पाएको बजेट खर्च गर्न नसके यसको जिम्मेवारी केन्द्रमा प्रदेश कसले लिनुपर्ने हो । मन्त्री ज्यू, ?
हामी काम गरी रहेको छु । सातवटै प्रदेश को अवस्था फरक छैन । सबै ठाउँमा संघबाट कर्मचारी खटेर जाने हो । रकम खर्च भएन भने राम्रो संदेश जनतामा जाँदै यी कुरा विचार गरेर प्रदेश २ का सरकारले काम गरी रहेको छन् । प्रदेश नम्बर २ सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो काम गरेका छन् ।
1485544	Times Visited.